Beverages - I'm Thirsty! - Somali
Biyaha - Wuu u baahan yahay Ilmahaagu!
Jirkeena badidiisa waa biyo. Biyahaas qaarkood ayaa u baahan maalin kasta in la bedelo. Marka ay cimiladu kululshahay waxaan u sii baahan nahay biyo badan. Sii biyo ilmahaaga waqtiyada u dhexeeya xiliyada raashinka caadiga ah la cuno iyo xiliyada raashinka dhexe la cuno. Isticmaal biyaha ay maadada fluoride ka ku jirto si aad uga hortagtid in ay ilkuhu bololaan (cavities).
Caanaha -Aad ayey caruurta ugu wanaagsan yihiin!
Caruurtu waxay maalintii u baahan yihiin qiyaastii 2 koob ama 16 ounce oo caano ah. Caanaha nooca whole milk (caanaha aan subaga laga saarin) ilmahaaga sii ilaa uu 2-sano jir ka gaarayo. Marka uu sanadkiisa labaad u dhamaado ka dib, waad siin kartaa caanaha subaga laga yareey (low fat) ama kuwa subaga laga wada saaray (skim milk).
Cabitaanta casiirka - Caruurta wuu u fiican yahay hadii in yar laga siiyo.
Caruurtu fitamiinka C waa ay u baahan yihiin. Fitamiinkaas waxay ka heli karaan cabitaanada WIC laga siiyo. Koob-barkiis (4 ounce) ayaa maalintii ku filan. Hadii uu ilmuhu biyo badan rabo biyaha aashitada leh (sparkling water) ugu badi cabitaanka. Ilmaha yar yari waa ay jecelyihiin cabitaanada casiirka ah sababta oo ah cabitaanadaas waa ay macaan yihiin, laakiin siinta ilmaha cabitaan casiir ah oo badan dhibaato ayey keeni kartaa.
Cabitaan casiir ah oo badan:
• Ilmaha caloosha ayuu ka buuxiyaa wuxuuna yareyn karaa cunadii uu u baahnaa ilmuhu inuu cuno.
• Ilkaha in ay ilmaha ka bollolaan ayuu keeni karaa.
Cabitaanada casiirka ah sokor dabiici ah ayaa ku jirta
• Shuban ayuu kiini karaan
• Cayil badan ayuu ilmaha u keeni karaa
Halkii aad ka siin lahayd cabitaan casiir ah oo dheeraad ah, sii ilmaha furuto caadi ah (khudrada sida tufaaxa iwm) maxaa yeelay waxaa ku jira maadadad fiber (maado saxarada sahasha).
Talo waalidiinta la siinayo
Caano sii ilmaha marka aad raashinka sadexda xili ama xiliyada u dhexeeya la cuno siineysid.
Sii biyo caadi ah waqtiyada u dhexeeya xiliyada uu wax cuno iyo marka ilmuhu ooman/haraadsan yahay.
Dhalo ama garaafo ay biyo caadi ah ku jiraan gasho qaboojiyaha/talaagadda si ay u qoboobaan una noqdaan kuwo firfircooni gelinaya. Ku sii biyaha ilmaha koobka uu ugu jecel ahay inuu wax ku cabo oo ay ku jirto tubada biyaha lagu nuugo ama ku sii biyaha caagagga isboortiga ee biyaha laga cabo.
U noqo tusaale fiican ee uu ilmuhu ku daydo. Iska goo dabeecada cabitaanada fudud ee lacabo! Sidaas bedelkeeda, meel kasta ee aad aadeyso u qaado caag/dhalo ay biyaha caadiga ah ee tubada ku jiraan si aad u cabto. Ilmahaagu wuxuu rabi doonaa waxa uu kugu arko adiga oo cabaya.
Ku koob cabitaanka casiirka ah ee ilmuhu cabo 4 ounce maalintii.
Biyo badan sii ilmahaada marka ay cimiladu kulushahay iyomarka uu ilmahaagu aad u ciyaarayo
Caruurtu uma baahna cabitaanada fudud, cabitaanada fudud ee aan sokorta lahayn(diet pop), cabitaanada Kool-Aid iyo punch. Sida badan caruurtu marka ay cabaan cabitaanada fudud ama cabitaano kale oo macaan leh gaajo ma qabato mana raboodaan in ay wax cunaan.
Shaaha iyo qaxwada uma fiicna ilmaha. Qaxwada, shaaha badankiisa iyo cabitaanada soodhada ah waxaa ku jira maadada caffeine. Maadada caffeine ta waxay caruurta ka dhigi kartaa kuwo si sahal ah u carooda, xarakaat badan waxayna u keenaan ilmaha in ay hurdi waayaan.
Cabitaanada dadka isboortiga ciyaara loo sameeyey caruurta yaryar looguma talagelin in ay cabaan. Cabitaanada isboortiga waxaa loogu talagalay cayaartoy tababar adag sameyneysa. Biyo caadi ah in la siiyo ayaa u fiican ilmaha firfircoon.